သင့်ကိုဘယ်လိုမှမယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါ လူတွေကဒီနည်းလမ်း(၅)မျိုးနဲ့ ယုတ်မာတတ်ကြတယ်
HomeNewsသင့်ကိုဘယ်လိုမှမယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါ လူတွေကဒီနည်းလမ်း(၅)မျိုးနဲ့ ယုတ်မာတတ်ကြတယ်
by - Mr.Kywet on - December 25, 2018
လောကမှာလူတွေဟာ ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက် အရမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့အခါ၊ သူတို့ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ စပြီး ယုတ်မာကြပါတော့တယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီလိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သူတို့ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါနော်။
လူတွေဟာ သင့်ကို မယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အတိတ်က အမှားတွေ၊ အားနည်းချက်တွေနဲ့ နာကျင်စရာတွေကို တူးဖော်လာကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ ပစ္စုပ္ပန်က သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကို ဘယ်လိုမှမယှဉ်နိုင်တော့တာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် လက်မခံနိုင်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ အတိတ်ဟောင်းနဲ့ စတင်တိုက်ခိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်တော့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်။ အတိတ်ဆိုတာ သင်ကျေ်ာလွှားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သင့်ရဲ့ မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေကို ပြောကြတော့မှာပါ။ သင်ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာတွေ၊ ဘယ်တုန်းကမှ မသိဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မဟုတ်မမှန် သတင်းလွှင့်ကြတော့မှာပါ။ ဒီလိုကောလဟာလတွေ အများစုကလည်း အပြင်ကမဟုတ်ပဲ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာ များပါတယ်။ ဒီအရာတွေကိုဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။
သင့်ကို ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါတွေမှာ ဒေါက်ဖြုတ်တဲ့နည်းကို အသုံးပြုပြီး ယုတ်မာတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဥပမာ လူစုံနေတုန်းမှာ မိမိကိုကဲ့ရဲ့တာ၊ လှောင်ပြောင်တာ၊ အမှားကို လူသိရှင်ကြားထောက်ပြတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ မြှောက်သလိုလိုလေးနဲ့တောင် မသိမသာ ဒေါက်ဖြုတ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒေါသထွက်မနေပဲ သင့်ကို သူတို့ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်လို့ဆိုတာကိုသိပြီး သနားတဲ့အကြည့်နဲ့သာ ကြည့်နေလိုက်ပါ။
လူတွေက သင့်ကိုမယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါ “လင်းတလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှတယ်” ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးချိုးလာကြတော့မှာပါ။ ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ ဟိုလိုလုပ်ပါလား ၊ ဟိုလိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ့် ဥစ္စာကို ၊ ဒါလေးများ ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ပြောလာကြတော့မှာပါ။ သူတို့ကပြောသာပြောတာပါ၊ သူတို့ကို တကယ်လုပ်ခိုင်းရင်တော့ တစ်ခုမှလည်း မလုပ်နိုင်ပြန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ ကိုယ့်ကို ဆရာလာလုပ်ရင် ဒီအတိုင်း ခေါင်းညိတ်ပေးနေလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်ထပ်ယုတ်မာတဲ့ ပုံစံကတော့ သင့်ကို ရှောင်ကြတော့မှာပါ။ သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ သူတို့ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ သင့်ကိုမယှဉ်နိုင်တော့တဲ့အခါ သင့်ကိုတောင် မြင်ဖို့ အားအင်သူတို့မှာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ကို ရှောင်ပြီး တမင်ခါချခဲ့တာတွေ၊ တမင် ဖယ်ခွာခဲ့တာတွေ လုပ်လာကြတော့မှာပါ။ ဒီလိုဆိုလည်း သင်ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ သင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့၊ သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ လူသစ်တွေနဲ့သာ ပျော်ရွှင်စွာနေလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အပြုံးဟာ သူတို့အတွက် မီးလိုပဲဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ဒါကြောင့် ပျော်ပျော်နေပါ!
Credit to Su Su Hlaing
You're going to be able to compete when they are unscrupulous people in implementing this method (5)
If people around the world will tend to get very worried. Ifaperson is very successful when, What is worse since you can not compare them to me. If you are experiencing these things if you do not compare them to know thataperson can love.
(1) your past partners
People will not be able to compete when your past mistakes, Mining and weaknesses and pain will come. They are present in your success, Spectacular We do not accept, or not be able to compete with your ex's past will attack. Because of these things, my angst. အတိတျဆိုတာ clearly achieved the shield is already too big.
(2) Rumor Streaming
Actually, this will be your false media reports said. Things that you've never done, I've never known and will be published false news stories. Most of these rumors and acquaintances are not likely. You do not need to take care of these things. Butterfly I'm important enough to me.
(3) dismiss Douglas
You're going to be able to compete when they are taken usingasmall heel as well. For example, while all of his sect, Satire Publicly pointed out the error of such ailments. At times, the bad times they removealittle subtle heels. Now angry because they do not match what you know and havealook and see.
(4) will haveateacher
People will not be able to compete as far as "vulture bird is beautiful," I'm going to break အခြိုးမြိုး. This is how I want to ride, Holo, the goods will get better I'm going to tell the world she is. They say, They do not really one if asked. So they are just going to get better is being nodded.
More Muslims, and will keep your form. They will not be, when you need them You should not be able to compete, not even to see them. So you deliberately avoid strike action, The ink will have been away. So you can not be sad. Relevant to you You really love to spend time with new people. Do not forget your smile just like them. So cheer up!